OFakazi BakaJehova Bagubha Unyaka Wekhulu BeseSlovakia
EBRATISLAVA, eSlovakia—OFakazi BakaJehova eSlovakia bebememe uwonk’ uwonke ehhovisi legatsha labo ngo-December 15, 2012, begubha unyaka wekhulu womsebenzi wabo wokufundisa ngeBhayibheli kuleli. Kusakazwe izimemo ezindaweni eziseduze zokuzobona lezi zakhiwo. Bangaphezu kuka-200 abeza bezobona indawo, kuhlanganise nezingxenye zayo eziyishumi ezibonisa izenzakalo eziyingqophamlando zomlando woFakazi eSlovakia.
Ngo-1912, abameleli boFakazi BakaJehova baqala umsebenzi wabo wokufundisa ngeBhayibheli eSlovakia. Ngo-1991, baba nenguqulo yeBhayibheli yesiSlovak enembile nefundeka kalula. Ihhovisi legatsha eBratislava lisekela umsebenzi wamaqembu amahlanu abahumushi besiSlovak. Umsebenzi wokuhumusha uhlanganisa nokuhumusha uLimi Lwezandla LwaseSlovakia, isiSlovak Roma SaseMpumalanga nesesi-Olah Roma. Zonke izincwadi namaBhayibheli anyatheliswa oFakazi atholakala mahhala. Kuze kube manje, oFakazi abangaphezu kuka-11 000 eSlovakia baqhubela abantu abangaphezu kuka-3 400 izifundo zeBhayibheli emakhaya abo mahhala isonto ngalinye, basize abantu bobudala obuhlukahlukene ukuba bathole injabulo eyengeziwe ekuphileni kwabo siqu nasemikhayeni yabo.
Kuqhutshwa imihlangano yemfundo yeBhayibheli emabandleni akhona angu-160, futhi abantu bamukelekile ukuhlanganyela kulezi zifundo zeBhayibheli zamahhala. OFakazi bananomlando omude wemihlangano yaminyaka yonke abaqala ukuba nayo ngo-1923. Ngo-2006, oFakazi BakaJehova baba nomhlangano okhethekile eBratislava, kwaba khona abangaphezu kuka-10 700 kuhlanganise nezihambeli ezingaphezu kuka-3 600 zaseCzech Republic, eHungary naseRomania.
URastislav Eliaš, umkhulumeli woFakazi BakaJehova eSlovakia uthi: “Phakathi neminyaka eyikhulu edlule, oFakazi BakaJehova bazakhele igama elihle eSlovakia ngokuhlalisana ngokuthula nabantu nangokuba izakhamuzi ezithembekile ezihlale zinobuhlobo obuhle nemindeni yazo kanye nomphakathi. Sizoqhubeka sisebenza kanzima ukuze sisize omakhelwane bethu ukuba bazuze emfundweni yeBhayibheli, njengoba nje nathi sizama ukwenza kanjalo.”